विकेश-को-लाडो - Indian Girls Nude XXX Images
जतिसुकै नछुट्टीने कोसिस गरेपनि समयको अगाडी हाम्रो के लाग्थ्यो र ? समयलाई बसमा राख्न कहाँ सक्थ्यौं र हामी ? म काठमाण्डौ जानुभन्दा हप्तादिन अगाडी नै विकेश पुनेतिर गयो । विकेश लाई बिदा गर्न म बस स्ट्याण्डसम्म जान पाउने संयोग परेको थियो उध्येश्य भने काठमाण्डौको लागी आफ्नो टिकट बुक गर्नु थियो । छुट्ने बेलातिर विकेश को रुञ्चे अनुहार देखेर मेरो मन पनि भक्कानिएर आएको थियो । हामी त्याहाँ एक अर्काको अंगालोमा कसिएर बिदाईको चुम्बन साटासाट गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनौं । केवल सजल नेत्रले एकअर्कालाई हेरेरै हामी बिदा भयौं ।
त्यसबेला मलाई कुनै गीतको अँश याद आईरहेथ्यो – ‘ समयनै ईश्वर हो समयले हिंडाउंछ तिम्रो मेरो अलग बाटो दोबाटोले छुटाउंछ ….’ तर हाम्रो परिस्थितीमा अहिले दोबाटो आएको भएपनि मिलनको दृढ संकल्प त छँदैथियो ।गाउँमा चौबिसै घण्टा विकेश संगै टाँसिएर त बस्दिनथें म फेरीपनि गाउँमा विकेश छैन भन्ने थाहा भएपछि गाउंनै शुन्य लागेको थियो मलाई । मन त्यसै बिरक्तिएर आएको थियो । एक साता मुश्किलले काटेर म काठमाण्डौ आएं । कलेज शुरु भै सकेको थियो । काठमाण्डौ आउनासाथ यो पटक मलाई केहि बिसञ्चो भएको भएपनि दुईदिन जती आराम गरेर ठिक भएकि थिएं । तेस्रो दिन बिहानै म कलेज जानलाई बस कुरीरहेकि थिएं मेरो नजिकै कसैले बाईक रोक्यो र म तिरै संबोधित भएर बोल्यो , ‘ तपाईंलाई म कहिं छाडीदिन सक्छु ?’ ‘ नो थ्याङ्क्स । मेरो बस आउंछ । ‘ उ तिर खासै ध्यान नदिएर मैले भनें । उसले आफ्नो टाउकोबाट हेल्मेट उतार्दै भन्यो , ‘तपाईँ यतै कतै बस्नुहुन्छ ? निक्कैदिन भयो मैले तपाईंलाई नदेखेको । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें ।” हेल्मेट उतारे पछि त्यो मान्छेलाई मैले कहाँ भेटे जस्तो कहाँ देखे जस्तो लागेको थियो । म चुपचाप उसलाई सम्झने कोसिसमा थिएं । मेरो बस आयो र म बसमा चढें । कलेज पुगुञ्जेलसम्म मलाई त्यो मान्छेले सम्झनामा पछ्याईरहयो । कहाँ देखेकि थिएं त्यो मान्छेलाई भनेर मैले सम्झनै सकिनं । भेट्छु भन्ने त लागेको थियो ; आज भेटें उसको पछिल्लो बाक्यले मलाई उसको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । मैले त कहिल्यै उसलाई भेटे जस्तो लाग्दैन , उसले मलाई कहाँ देख्यो होला र भेट्छु भन्ने लागेको होला । दिनभरी मनमा यस्तै खुल्दुली भईरहयो ।अर्कोदिन पनि बिहानै बस पर्खिरहँदा उ बाईकमै देखापर्यो ।
आज उसको हेल्मेट बाईकमा पछाडी राखेको थियो । मैले उसलाई अझै सम्झन सकेकि थिईनं तर उ भने जन्मौं देखिको परिचित झैं परैबाट मुस्कुराउंदै मेरो छेउमा आयो र मेरो नाम सोध्यो ।‘ सानी । ‘मैले आफ्नो नाम बताएं । उ किन यसरी मेरो पछि परिरहेको छ ? लव एट फर्स्ट साईट भनेझैं भएको हो कि उसलाई । उ आफुपनि ह्याण्डसम थियो । म पनि कहिं कतै उ प्रति आकर्षित भएकि थिएं कि ? हामीबिच कहिं केही त पक्कै पनि हुनु पर्थ्यो तर कहाँ के थियो मैले बुझ्नै सकिरहेकि थिईनं ।‘सानी त तिम्रो घरको बोलाउने नाम पो होला नि , हैन र ? जे होस राम्रो नाम छ । म रिनभ । तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो । ‘ उसले म तिर हात बढायो । मैले पनि उ संग हात मिलाउंदै धन्यवाद मलाई पनि खुशी लग्यो भनें । मेरो बस आईसकेको थियो । म जान्छु ल भन्दै बसमा चढ्न अघि बढें । ‘ म पनि एभरेष्टमै पढ्छु । संगै जाने हो ? ‘ उ भन्दैथियो । म बसको ढोकामा पुगीसकेकि थिएं । भित्र छिर्दै म बोलें , ‘ हैन बस नै ठिक छ । थ्याङ्क्स दो । ‘बसभित्र हिंजैमात्र चिनेकी साथी अनिता थिई । म उसैको छेउमा बसें । ‘ रिनभलाई तिमीले कहिले देखि चिनेकी ? ‘ उसको नजिक बस्नासाथ उसले मलाई सोधि । ‘ अहिले भर्खरै । किन र ? ‘ जवाफ दिएर मैले पनि सोधें ।‘ त्यसै । ‘ उसले बताउन चाहिन । केहिबेर चुपलागेर फेरी उ बोली , ‘ यु आर लक्की सानी । आई फील जेलस टु यु । ‘ उसको बोली केहि मधुरो थियो । ‘ ह्वाई ? ह्वाई यु फील जेलस टु मी ?’ मलाई जान्ने उत्सुकता भयो । ‘आई विल टेल यु लेटर , नट नाउ । ‘ अनिताले भनी ।‘ आई नो अनि , ह्वाई यु फील फील जेलस टु हर । ‘ पछाडीबाट अर्को केटा बोल्यो । उसले अनितालाइ अनि मात्रै भन्दोरहेछ । उसले अनि भनेको मलाई राम्रो लाग्यो । ‘ उड यु प्लीज सट अप अवि ? ‘ अनिता बोली । अनितालेपनि उसलाई अवि भन्दा उनिहरु निक्कै घनिष्ट हुन भन्ने बुझिन्थ्यो अथवा उसको नाम अवि मात्र पनि होला ।‘ सानी , दिस बास्टर्ड ईज अविनास । अवि सि इज सानी । ‘ मैले उनिहरुको निकटताको बारेमा सोच्दै गर्दा अनिताले हाम्रो परिचय गराई । `वावो , ह्वाट अ नेम ,सानी । ईज दिस योर न्वारानको नेम सानी ? ‘ अविनासले मलाई जिस्काउने शैलीमा भन्यो । बसमा भएका अरुपनि हाँसे । ‘ इज दियर एनि प्रोब्लम विद माई नेम ? ‘ म अविनास प्रति आक्रोशित भएर बोलें । ‘ इन्डिड माई नेम इज सुप्रिया अन माई आईडीज बट आई लाईक सानी मच बेटर ।‘‘ ओके सानी , आई विल कल यु सानी अलवेज ।‘ अविनास भन्दैथियो ।
वरिपरीका सबै हात हल्लाएर कोहि हाई सानी आई एम सुमित्रा , कोहि हाई सानी आई एम जेम्स , कोहि हाई सानी आई एम एन्जी…….. भन्दैथिए । मैले सबैलाई हात हल्लाएर हाई भनें । हाई हेल्लो भन्नलाई कलेजमा मेरा धेरै साथीहरु भैसकेका थिए तर घनिष्ठता भने अनिता संग थियो । एकदिनलाईब्रेरीमा दुईजना मात्र भएको बेला अनिताले सोधी , ‘ सानी उड यु माईण्ड ईफ आई से समथिङ्ग टु यु ? ‘ मैले भनें , ‘ अफ कोर्स यस । ईफ यु से समथिङ्ग ब्याड टु मी । ‘एकछिन हामी दुबै हाँस्यौं । अनिताले फेरी भनी , ‘ आई एम सिरियस सानी , मैले साँच्ची भनेकि । ‘ उ गंभिर देखिई । ‘ म पनि सिरियस छु सानी । क्यारी अन । ‘ गंभिर बन्ने प्रत्यत्नमा मैले भनें ।‘ यु नो आई……… आई लभ रिनभ एण्ड नाउ आई अफ्रेड द्याट हि ईज पेईङ एटेण्सन टुवार्ड यु । ‘ अनिता मैले भरोसा गर्ने यौटैमात्र साथी । उस्लाई रिनभले मलाई मन पराउंछ भन्ने चिन्ता रहेछ । मलाई कता कता रिस उठे पनि यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिएं मैले । म यौटा असल साथी गुमाउन चाहन्नथें । रिनभसंग मेरो त्यस्तो केहि छैन भनेर मैले अनितालाई संझाएं । मैलेविकेश को बारेमा पनि उसलाई भनें । सकेसम्म उसलाई विश्वास दिलाएर म ढुक्क थिएं तर त्यस रात अबेर सम्म मेरो मनमा कस्तो बेचैनी रहिरह्यो । भोलीपल्ट मेरो निन्द्रा खुल्दा अबेर भै सकेको थियो । कलेज छुट्ला भनेर हतार हतार गरेर बाहिर निस्कंदा बस छुटिसकेको थियो तर म संधै बस चढ्ने ठाउँमा रिनभ मलाई नै कुरेझैं बसिरहेको थियो । मलाई देख्नासाथ उ बोल्यो , ‘ ढिलो भयो ? आउ संगै जाउं । ‘ म संग बिकल्प थियो पनि होला ,जसोतसो म ट्याक्सी गरेर कलेज जान त सक्थें तर त्यसको लागी लाग्ने खर्च जोगाउन सके मलाई क्याण्टीनमा खर्च गर्न हुन्थ्यो त्यसैले म चुपचाप उसको बाईकमा पछाडी बसें । केहिबेर नबोलेरै हामी अगाडी बढिरहयौं । केहि अगाडी पुगेर यौटा पसलको अगाडी बाईक रोक्दै उसले भन्यो , ‘ सानी म सिगरेट लिईहालुं है ।‘ मलाई आपत्ती थिएन म बाईकबाट ओर्लिएर छेउमा उभिएं । उ चुपचाप पसलमा गयो र एक प्याकेट सिगरेट लिएर फर्क्यो । बाईक स्टार्ट गर्दै बोल्यो उ , ‘ सानी तिमीलाई थाहा छ यो पसल ? ‘‘थाहा छैन त ।‘ केहि नसोचिकनै उसको पछाडी बस्दै म बोलें ।‘मैले तिमीलाई यहि पसलमा पहिलो चोटी भेटेको । ‘‘ हो र ? कहिले ? ‘ हाँस्दै बोलें म ‘ मलाई थाहा छैन । ‘‘ भुल्यौ होला तिमीले तर म त्यो भेट कहिले भुल्न सक्दिनं । तिमी त्यसदिन कण्डोम किन्दैथियौ । ,‘ओ माई गड ! ‘मनमनै बर्बराएं म । ‘ मैले कण्डोम किन्दा पसल बाहिर बसेर चुरोट तान्ने केटा ?’‘ साँच्ची कस्को लागी किनेको तिमीले ? ‘ मेरो मौनता भंग गर्दै रिनभले सोध्यो ।‘ आफ्नै लागी । तर तिमीलाई किन चासो नि मेरो ब्याक्तीगत कुरामा ? ‘ आपत्ती जनाएं मैले ।‘ हैन त्यस्तो केहि हैन । सोधेको नि । ‘ एकछिन चुप लाग्यो उ ।‘ त्यही भएर तिमी मेरो पछि लागेको ? तिमीलाई म त्यस्तो खालको केटी लाग्यो ? ‘ मैले अली कडा बन्ने हिसाबमा भनें ।‘ हैन यार तिमी मलाई गलत बुझ्दैछौ । मलाई त त्यही दिन तिम्रो तर्कशक्ती देखेर पो तिमी मन परेको ।
म तिमीलाई मन पराउंछु सानी तर मलाई गलत नबुझ । तिमीले मलाई मन पराउंदैनौ भने पनि ठिकै छ । मैले मन पराएको मान्छेले मलाई पनि मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । ‘ रिनभले एकै सासमा उसको मन राख्यो । कति सजिलो कसैको अगाडी मन राख्न ? सहरबजारका केटाहरुलाई केटी मन पराउनु भनेको कुनै सिनेमा मनपराउनु जस्तो हो कि क्या हो ? हामी कलेज पुगीसकेका थियौं । कलेजभित्र म रिनभसंग छिर्दा धेरैले देखे । उनिहरुले सायद गलत अर्थ लगाए होलान । मलाई अनितालाई यो सबै कुरा सुनाउन मन थियो तर उ हामीलाई देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेर अर्कोतिर गई । उ रिसाई होला जस्तो लाग्यो र मैले बोलाएं पनि तर उ सुनेको नसुने झैं गई । क्लासरुमभित्र संगै बस्ने अनिता मसंग नबसेर पछाडी गएर बसी । ब्रेक हुनासाथै मैले उसलाई बोलाएं तर उसले सबैको अगाडी मेरो बेईजत गर्दै भनि , ‘ यु फ्रिकिन विच । हाउ डेयर यु टेक राईड विद रिनभ ? आई अलरेडी टोल्ड यु रिनभ ईज माई ब्वाई फ्रेण्ड । आ‘म सरी विच , यु आर नो मोर माई फ्रेण्ड ………….. ‘ अनिताले मेरो कुरै सुनिन । एकोहोरो मलाई गाली गरिरही । निक्कै सिपालु रहिछे उ झगडा गर्न । मैले केहि भन्नै सकिनं न त मन थाम्नै सकें । म क्लासरुममा सबैको अगाडी रोएं ।म रोएको देखेर केहि हाँस्नेहरु थिए । केहि मलाई सम्झाउंदै थिए । सम्झाउनेमा अविनाश पनि थियो । मसंग अरुभन्दा अलिबढि घुलमिल भएको नाताले त्यसबेला मेरो सहारा बन्यो अविनाश । ‘ म घर जान्छु । आज क्लास लिन सक्दिनं । ‘ मैले ट्याक्सी बोलाउन अविनाशको सहयोग मागें । मेरो क्लासमा बस्न सक्ने स्थिती पनि थिएन । अविनाश मलाई बाहिर सम्म छोड्न आयो । दुईतिन दिन सम्म म कलेज जान सकिनं । जानै मन लागेन । मैले कलेज फेर्ने निर्णय गरेकि थिएं । एकदिन अविनाश र सुमित्रा मेरो घर आए र मलाई कलेज जान कर गर्न थाले । मैले उनिहरुलाई कलेज फेर्ने कुरा सुनाएं । उनिहरु दुबैजनाले मलाई गाली गर्दै सम्झाए । मैले अनिताको अगाडी हारेर हैन जितेर देखाउनु पर्छ भन्ने उनिहरुको मान्यता थियो । एक हिसाबले मलाई उनिहरुको कुरा ठिक पनि लाग्यो । रिनभले अनितालाई मनपराउंदैन र अनिताले म संग झगडा गरेको कुरालाई लिएर रिनभले अनितालाई गाली गर्यो भनेर पनि उनिहरुले मलाई सुनाए । मैले भोली देखि कलेज जाने बिचार गरें ।
भोलीपल्ट बिहान पनि अविनाश र सुमित्रा मलाई लिन आए । अविनाशले पनि नयाँ बाईक किनेको रहेछ , म उनिहरु संगै बहिर निस्कंदा थाहा भयो । ‘ आजदेखि हामी संधै बाईकमा कलेज जाने ।‘ अविनाशले भन्यो ।‘ तर तिम्रो बाईकमा तिनतिन जना कसरी जाने नि ? ‘ मैले जिज्ञासा राखें ।‘ ए , तिमी कहाँ मेरो अविनाशको बाईकमा जान पाउंछौ त ? तिम्रो बाईक उ त्यहाँ छ । ‘ सुमित्राले भनी ।सुमित्राले देखाएतिर रिनभ मुसुमुसु हाँस्दै थियो । उ बाहिर नै मलाई पर्खिरहेको रहेछ , बोल्यो , ‘ जान्छौ हैन मेरो बाईकमा ? ‘म रिनभको बाईकमा बसें । अविनाश र सुमित्रा अविनाशको बाईकमा थिए । अविनाशले अनितालाई मनपराउंथ्यो अनिताले रिनभलाई तर सुमित्राले अविनाशलाई मन पराउदिरहिछे यो मलाई थाहा थिएन र अहिले सुमित्रा र अविनाश जोडी बनिसकेछन । ‘ब्यावहारले मान्छेलाई मान्छे देखि टाढा पुर्याउंछ । ‘ यो उखान चरितार्थ भएको थियो अनिताको जीवनमा । आजभोली उसको मिल्ने साथी थिएन । म संग बोल्न खोजुंला जस्तो गर्छे कहिलेकाहिं तर म उसलाई वास्ता गर्दिनं । हरेकदिन कलेज जाँदा रिनभ र अविनाश पर्खिपर्खि कलेजको बससंगै बाईक हिंडाउथे । अनितालाई देखाएर जलाउने उनिहरुको चाहना , मेरो पनि त्यही थियो कामना । म अनितालाई जलाउनकै लागी रिनभको पछाडी चपक्कै टाँसीएर बाईकमा बस्थें । रिनभसंग प्रेमको नाटक गर्दागर्दै मलाई रिनभ साँच्चै मनपर्न थाल्यो । सधैं रिनभलाई देखिरहन मन हुन्थ्यो ।आखिर प्रेम भन्नु पनि एक प्रकारले नशा न हो ।
मलाई रिनभसंग हिंड्ने डुल्ने नशा लागीसकेको थियो त्यही क्रममा सायद मलाई रिनभसंग शारिरिक संबन्ध राख्ने पनि उत्कट ईच्छा भएर आएको थियो । तर कहाँ कसरी म उसलाई यो कुराको प्रस्ताव राख्ने , अलमलमा थिएं । रिनभलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ तर उसले पनि मलाई प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन । एकदिन कलेजबाट फर्किंदै गर्दा रिनभलाई त्यही पसल अगाडी बाईक रोक्न लगाएं र भनें , ‘ रिनभ आज तिमी मेरो घरमा बस्ने ल ? म एक्लै छु घरमा । ‘रिनभ अलमल्ल पर्यो । उ प्रतिक्रियाविहिन देखेर फेरी मैले सोधें , ‘ हुन्छ कि हुन्न ? ‘‘ हुन्छ । भै हाल्छ नि तर तिम्रो आण्टीहरु ? ‘ ‘ वहाँहरु गाउँ जानु भएको छ । अंकलको घरमा कुन्नि कसको बिहे छ रे ।‘ मैले भने , ‘ तिमी केहि कण्डोम किनेर ल्याउंछौ ? ‘ यति भनेपछि मैले रिनभलाई म तिमिसंग सुत्न चाहन्छु अथवा तिमीसंग शारिरिक सम्बन्ध राख्न मन लागेको छ भनिरहनु परेन ।‘ हँ ! ‘केहि झस्किएर रिनभ बोल्यो , ‘ हुन्छ म गएर आउंछु । ‘रिनभले त्यही पसलबाट केहि कण्डोम लिएर आयो । हामीलाई घरजानु हतार थिएन त्यसैले हामी घुम्न जाने मूडमा थियौं । ‘ भोली कलेज बिदा पनि छ बरु हामी कतै बाहिर जाउं न । ‘ रिनभले उपाय सुझायो , ‘नगरकोट जाने हो ? ‘मलाई केहि आपत्ती थिएन । घर पुगेर एकरात बस्ने तयारीका साथ हामी बाटो लाग्यौं । बाटैभरी म रिनभसंगको यौनानन्दको कल्पनामा मस्त बनिरहें । त्यसै त ढिलो हिंडेका थियौ हामी त्यसमाथी बाटोमा पर्ने अरु ठाउं पनि घुम्दै आएका थियौ । त्यसैले हामी सांझमा मात्रै गन्तब्यमा आईपुग्यौं र यौटा लजमा बस्यौं ।रात जब म रिनभसंग यौटै बेडमा नग्न अवस्थामा थिएं मलाई विकेश याद आयो । उ के गर्दै होला ? मलाई उसको माया लागेर आयो । विचराविकेश मलाई सम्झेर सुतेको होला यसबेला । म भने यो के गर्न जाँदैछु ? म विकेशलाई सम्झेर पुरानो यादमा हराईरहेको बेला रिनभ मेरो खुट्टाबाट मलाई चुम्न शुरुगर्दै माथि बढ्दै थियो । जब रिनभको मुख मेरो पेण्टीमाथीबाट मेरो योनिमा आईपुग्यो मैले विकेशलाई सम्झिरहन सकिंन । म उत्तेजनाको चरम उत्कर्समा थिएं ।
मेरा हातहरु आफ्नै स्तन निचोर्न ब्यस्त थिए । रिनभले उसको दाँतले टोकेर मेरो पेण्टी उतार्ने कोसिस गर्दैथियो मैले ढाड र कुर्कुच्चाको बलले आफ्नो योनिभाग उठाईदिएं । मेरो पेण्टी उतारेर रिनभ मेरो योनि चुस्न थाल्यो । आनन्दको यो क्षणले मलाई स्वर्गको अनुभुती दिलाईरहेथ्यो । मैले रिनभलाई तानेर बेडमा लडाएं र उ माथी चढेर उसको नाडीझैं कडा लिंग आफ्नो मुखमा लिएर चुस्न थालें । हामी एक अर्काको ठिक बिपरित थियौं । रिनभ मेरो योनि चुस्दैथियो म उसको लिंग । केहिबेर सम्म यो प्रक्रिया चलेपछि रिनभले मलाई कम्मरमा समाएर उचाल्दै बेडमा उत्तानो पारेर सुतायो र मेरो कानमा आएर फुस्फुसायो , ‘ सानी , तिमी तयार हो ? ‘ मैले उसको ओठमा एक चुम्बन दिएर मुस्कुराउंदै हो भन्ने संकेत दिएं । रिनभ म माथी चढ्न आयो । उसको शरिरको वजन मेरो शरिरमाथी पर्दा मलाई मसाज गराएझैं हुंदैथियो । मैले आफ्नो दुबै आखा चिम्लिएकी थिएं । मेरो हात रिनभको चौडा ढाड सुम्सुम्याउंदै थिए ।
रिनभले पनि उसको दुबै हातले मलाई कसिरहेको थियो । यो अवस्थामा उसको लिंग मेरो योनिमा सहजै पस्न सक्ने थिएन त्यसैले मैले मेरो एक हात उसको ढाडबाट हटाएर उसको लिंगमा लगें र उसको मोटो लामो लिंगलाई समाएर मेरो योनिको प्रवेशद्वारमा राखें । रिनभ मलाई भन्दैथियो , ‘ आखा त खोल । किन लाज मानेकि सानी ? ‘ मलाई कतिबेला रिनभको लिंग मेरो योनि भित्र प्रविष्ट हुन्छ र मेरो यौनाग्नी शान्त पार्छ भन्ने हतार भैरहेको थियो । मैले आखा खोलेर पुन रिनभको ओठमा आफ्नो ओठ जोड्दै भने , ‘ छिटो न । ‘ रिनभलेहलुकासंग उसको लिंग मेरो योनीभित्र प्रवेश गराउन थाल्यो । उसले म माथी मच्चिएकै तालमा ताल मिलाएर म पनि तलबाट माथीतिर आफ्नो योनि भाग उठाउंदै उसलाई साथ दिन थालें ।
यो अबर्णनिय आनन्दमा डुब्ने क्रममा हामीले ल्याएको कण्डोम पनि प्रयोग गर्न भुलेका रहेछौं । त्यसो त मलाई आफ्नो योनिभित्रकण्डोम रहित लिँगकै घर्षण मन पर्छ । सारा संसार बिर्षेर हामी त्यसरात झिमिक्कै नसुती पटक पटक यौनानन्दमा लीन भै रहयौं………
← Suhani Ko pailo experience…	hot-elder-sister-alone-home →